भविष्यको लागि स्मार्ट उपलब्धि लक्ष्यहरू कसरी सेट गर्ने - व्यक्तिगत विकास क्याफे
भविष्यको लागि स्मार्ट उपलब्धि लक्ष्यहरू कसरी सेट गर्ने
पोस्ट व्यवस्थापक | दिसम्बर 18, 2019 | गोल सेटिंग, व्यक्तिगत विकास |0|
1 स्मार्ट लक्ष्य के हो?
1.1 भविष्यको लागि स्मार्ट उपलब्धि लक्ष्यहरू कसरी सेट गर्ने
1.2 तपाइँको मूल मानहरू मिलाउनुहोस्
1.3 स्मार्ट गोल उदाहरणहरू
1.4 भविष्यका लागि स्मार्ट उपलब्ध लक्ष्यहरू बनाउनुहोस्!
1.4.1 लक्ष्य जर्नलको साथ तपाईंको प्रगतिहरूको ट्र्याक राख्नुहोस्
हामीमध्ये धेरैले आफूलाई लक्ष्यहरू राख्छौं जुन हामी जीवनमा पुग्न चाहन्छौं। त्यसोभए तपाईं कसरी यसको सफलतापूर्वक जान सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं वास्तवमै तपाईंको लक्ष्यमा पुग्न चाहानुहुन्छ भने, लक्ष्य सेटिंगको एक उत्तम विधि भविष्यका लागि प्राप्य लक्ष्यहरू सेट गर्नु हो।
स्मार्ट लक्ष्य के हो?
लक्ष्यहरू बनाउँदा, यो एक्रोनिम स्मार्टको बारेमा जान्न महत्त्वपूर्ण छ
प्रत्येक अक्षर लक्ष्यको बिभिन्न क्षेत्रको लागि खडा हुन्छ। यदि तपाईं स्मार्ट लक्ष्य सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले लक्ष्य सिर्जना गर्नुभयो जुन निर्दिष्ट, मापन योग्य, कार्यक्षम, व्यावहारिक, र समयबद्ध हो।
स्मार्ट गोलहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई अझ राम्रो लक्ष्यहरू बनाउन र तपाईंको लक्ष्य सेटि inमा सफलताको लागि सेट अप गर्न मद्दत गर्दछ।
S - विशिष्टको लागि खडा हुन्छ, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईंको लक्ष्यलाई एकदम सटीक हिसाब गर्नु पर्छ। लक्ष्य के हो भन्नेमा कुनै श doubt्का नगरेको भाषा प्रयोग गरेर, तपाईं किन लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, र तपाईं कसरी त्यहाँ पुग्नुहुनेछ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाइँ लक्ष्यको वर्णनमा विस्तृत हुन सक्षम हुनुहुन्न भने, यसलाई पूरा गर्न गाह्रो हुनेछ। यस भागलाई सहि गर्न समय लिनुहोस्।
M - मापन योग्यका लागि खडा हुन्छ, यसको मतलब यो छ कि तपाईं यसलाई मेट्रिकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ जसको लागि सफलता निर्धारण गर्नुहोस्। यदि तपाइँको लक्ष्य मापन गर्न सकिदैन, तब यो पूर्ण लक्ष्य होईन र तपाइँ कसरी सफल हुनुभयो भनेर कसरी थाहा छैन।
मापनयोग्य लक्ष्यको उदाहरण केहि यस्तो छ: "म एक वेबसाइटको लागि प्रत्येक हप्ता पाँच लेख लेखेर हाम्रो बैंकमा प्रति हप्ता २०० डलर थप्न चाहन्छु।"
A - "A" कि त कार्ययोग्य, असाइनमेन्ट वा प्राप्यको लागि खडा हुन सक्छ। वास्तवमै केहि राम्रो काम गर्नको लागि प्राथमिकता भनेको तपाईंको लक्ष्यलाई कार्यशील बनाउनु हो, यसको अर्थ जहाँ तपाईं प्रत्येक दिनको लागि केहि गर्न सक्नुहुन्छ जुन अन्ततः एक पूरा लक्ष्यको परिणाम हुनेछ।
लक्ष्यहरू पनि प्राप्त गर्न योग्य हुनुपर्दछ वा तपाईं मात्र निराश हुनुहुनेछ। यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि लाग्ने समयको बारेमा निश्चित हुनुहोस्, र त्यहाँ पुग्न के कार्यहरू गर्दछन्। साथै, जान्नुहोस् कि यसको लागि को जिम्मेवार हुनेछ।
R - यो यथार्थवादी वा सान्दर्भिकका लागि खडा हुन सक्छ, र कि त दुबै महत्त्वपूर्ण छन् र सत्य छन्। यदि तपाइँ तपाइँको लक्ष्य सफल हुन चाहानुहुन्छ भने, यो वास्तवमै केहि वास्तविकतामा हुनुपर्दछ वा तपाइँ असफल हुनुहुनेछ। यो तपाइँको जीवनको दृष्टिसँग पनि प्रासंगिक हुनुपर्दछ र तपाइँको मानहरूसँग मेल खान्छ।
T - SMART एक्रोनिममा "T" या त समय-बाउन्ड, समयमा वा ट्र्याकेबल हुन सक्छ। यी सबै 't's' लक्ष्य सिर्जना र प्रक्रिया प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंशहरू हुन्।
यदि तपाईं एक समय सीमा सेट गर्नुभएन र तपाईं के हुँदैछ भनेर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंको लक्ष्य क्वान्टिफाइ गर्न वा हासिल गरेको रूपमा देखाउन कठिन हुनेछ।
तपाईले आफ्ना लक्ष्यहरू कल्पन गर्न मद्दत गर्न जुनसुकै शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंलाई स्मार्ट लक्ष्यहरू बनाउन मद्दतको लागि एक प्रक्रिया हुनु आवश्यक छ।
स्मार्ट लक्ष्यहरू लक्ष्यहरू हुन् जुन तपाईं प्राप्त गर्न अनुगमन गर्नुहुन्छ र जान्नुहोस् जब तपाईं तिनीहरूलाई भेट्नुहुन्छ।
प्राप्त गर्न सकिने शक्तिशाली लक्ष्यहरू सेट गर्न, सपनाहरू अनुसन्धान गर्न केहि समय लिनुहोस् जुन उनीहरू सम्भव छन् कि भएन भनेर पत्ता लगाउनको लागि।
तपाईं आफैलाई चुनौती दिन चाहनुहुन्छ, तर तपाईं लक्ष्य यति कठिन बनाउन चाहनुहुन्न कि तपाईं मात्र असफलता अनुभव।
अधिकतम सफलता सुनिश्चित गर्न, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको लक्ष्यहरू निम्न मापदण्डमा मिल्दछ।
तपाइँको मूल मानहरू मिलाउनुहोस्
त्यहाँ केही लक्ष्य कोटीहरू समावेश छन्:
अधिक कुनै पनि लक्ष्य जीवनको चार मुख्य क्षेत्रहरू मध्ये एकमा फिट हुन्छ - पारिवारिक, वित्तीय, शारीरिक वा व्यक्तिगत - अधिक संभावना तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुने यथार्थिक लक्ष्य सेट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि केहि कारणका लागि लक्ष्य तपाइँको मूल मानहरू मध्ये एकमा फिट हुँदैन, यस्तो सम्भावना छैन कि तपाइँ धेरै सफलता अनुभव गर्नुहुनेछ।
नियन्त्रणमा १०० प्रतिशत हुनुहोस्
जबकि अरूमा निर्भर लक्ष्यहरू गलत छैनन्, ती हासिल गर्न गाह्रो छ। कुनै पनि लक्ष्य जुन तपाईंले १०० प्रतिशत नियन्त्रण गर्नुभयो त्यो लक्ष्य हो जुन तपाईं पुग्न सक्नुहुनेछ।
तर यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो बाटोमा डर नराख्न दिदै हुनुहुन्छ वा असफलताको लागि भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ। आत्म-सीमित विश्वासहरू यो एक मा तपाइँको बाटो मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यथार्थपरक हुनुहोस् कि तपाइँसँग नियन्त्रण छ वा छैन र आफैलाई थप क्रेडिट दिनुहोस्। उदाहरण को लागी यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको आर्थिक भविष्य मा नियन्त्रण छैन किनकि "यो यस्तै मात्र हो", तपाइँ गलत हुनुहुन्छ र सोच्न को यो लाइन लाई हटाउनु पर्छ।
एक SWOT विश्लेषण पूरा गर्नुहोस् तपाइँको सामर्थ्य र कमजोरीहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न। एकचोटि तपाई कुनै कमजोरीको बारेमा सजग हुनुभयो - ठेगाना दिनुहोस्।
लक्ष्यको कल्पना गर्न सक्षम हुनुहोस्
यदि तपाईं अन्तिम परिणाम देख्न सक्नुहुन्न, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुनेछ। यदि तपाइँ एक चित्र कोर्न को लागी, एक दृष्टि बोर्ड बनाउनुहोस्।
वा तपाइँ आफ्ना ठूला सपनाहरूको कल्पना गर्न एक दिन निकाल्न सक्नुहुनेछ र हेर्नुहोस् कि कसरी तिनीहरू सबै एकसाथ तपाईंको जीवनको ठूलो चित्रमा फिट हुन्छन्।
तपाईंले अन्तिम लक्ष्य देख्नु आवश्यक छ यसलाई साच्चै प्राप्त गर्न सक्षम हुन।
प्रत्येक लक्ष्य तपाइँले प्रकृतिमा धेरै विशिष्ट हुन आवश्यक छ। यदि तपाईं लक्ष्यमा पुग्न निश्चित हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले यो कहिले थाहा पाउनुपर्दछ भनेर जान्नुपर्दछ।
"म एउटा व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छु" भन्नुको सट्टा तपाईले कस्तो प्रकारको व्यवसाय सुरु गर्न चाहानुहुन्छ ठीकसँग बताउनुहोस्।
कल्पना गर्नुहोस् र तपाईं को ग्राहक हुन चाहानुहुन्छ को पहिचान गर्नुहोस्। त्यस चित्रको जति तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, लक्ष्य कत्ति ठोस हुन्छ।
कुन लक्ष्यमा तपाईंले लक्ष्य प्राप्त गर्नुभयो? यदि तपाईं संख्या वा मापन योग्य केहि दिन सक्नुहुन्न भने, तपाईंसँग वास्तविक प्राप्ती योग्य लक्ष्यहरू हुँदैन।
यदि तपाइँ व्यापारको उदाहरण प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ एक निश्चित मिति द्वारा प्रत्येक हप्ता x रकम कमाउन चाहानुहुन्छ र त्यसपछि कसरी र किन तपाइँ यो गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यहाँ पुग्न कदम चाल्नु पर्छ। तपाईं जान चाहानुहुन्छ भन्ने गन्तव्यमा पुग्न नक्साको प्रयोगले जस्तै तपाईले आफ्नो नक्शा को लागी सफलताको दर्शनमा पुर्‍याउनुपर्नेछ जुन तपाईं बाटोमा साथ साथ लिनुहुनेछ।
केवल के मात्र तर कहिले राख्नुहोस्, र तपाईं कसरी चरण पूरा गर्नुहुनेछ।
स्मार्ट गोल उदाहरणहरू
याद राख्नुहोस् लक्ष्यहरू व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यापार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य र अधिक हुन सक्छ।
तिनीहरू छोटो, मध्यम वा लामो अवधि, सरल वा जटिल हुन सक्छन्। यहाँ केही उदाहरणहरू छन्।
स्मार्ट लक्ष्य उदाहरण १:
टोमी आफ्नो भोजनमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा घटाएर १ p पाउण्ड कम गर्न चाहन्छन्। यो एक प्राप्य लक्ष्य हो, तर यो एक उत्कृष्ट लक्ष्य होईन।
तर उसको पतन टिभीमा फुटबल देखिरहेको छ जब उसले बियर पिउँदछ र स्नैक्स खानेछ। त्यसैले ऊ फुटबल मौसममा असफल हुने सम्भावना छ।
जे होस्, यो हासिल गर्न एक विशिष्ट अवधि सेट गरेर बाहिर फुटबल मौसमको, उनीसँग अब एक स्मार्ट गोल छ।
पीटर र जेनले घरको लागि जम्मा बचत गर्ने निर्णय गरे। एक महान, तर अस्पष्ट लक्ष्य। यसलाई स्मार्ट लक्ष्यमा परिवर्तन गर्नको लागि उनीहरूले विवरणहरू थप्नु पर्छ।
त्यसो भए सबै भन्दा पहिले एक लक्ष्य रकम सेट - उदाहरणका लागि $ 30,000। त्यसोभए तिनीहरूले निर्णय गरे कि यो वास्तविकतामा यसलाई गर्नको लागी years बर्ष लाग्छ।
अब यो स्मार्ट लक्ष्य को निगरानी गर्न सकिन्छ र यसलाई प्राप्त गर्न योग्य बनाउन समायोजित गर्न सकिन्छ।
भविष्यका लागि स्मार्ट उपलब्ध लक्ष्यहरू बनाउनुहोस्!
तपाईं लक्ष्य लेख्न चाहनुहुन्न जुन हासिल गर्न एकदम गाह्रो वा नराम्रो, असम्भव छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो वैज्ञानिक तरिकाले गर्न सम्भव छ कि सबै चीजलाई वास्तविक रूपमा अनुसन्धान गरेर।
तपाइँको कार्यहरूलाई सानो भागमा तोड्नुहोस्। यसले अधिक विशिष्ट, प्राप्य लक्ष्यहरूको परिणाम दिनेछ।
उदाहरण को लागी, तपाईं सायद आज एक व्यापार शुरू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र छ आंकडा कमाउन भोली वा व्यापार मा पहिलो वर्ष सम्म।
अनुसन्धान हेर्नुहोस् र निर्धारित गर्नुहोस् के उचित छ र तपाईं यो कसरी गर्नुहुनेछ।
प्रत्येक लक्ष्यको समय सीमा हुनुपर्दछ अन्यथा तपाईले यसलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
अन्तको साथ सुरु गर्नुहोस् र आज फिर्ता तपाईंको बाटोमा काम गर्नुहोस्। अन्त परिणाममा पुग्न प्रत्येक दिन चीजहरूको सूची सिर्जना गर्नुहोस्। तर, समय सीमा तोक्नुहोस्।
तपाईं परियोजनामा ​​प्रवेश गरेपछि तपाईं यो समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ यदि यो अधिक यथार्थपरक हुन कार्य गर्दछ भने। प्रयास गर्नुहोस् र समय परिवर्तन गर्न आग्रहलाई प्रतिरोध गर्नुहोस् किनकि तपाईं आफ्नो कार्य सूचीहरूमा टाँसिनुहुन्न।
भविष्यको लागि शक्तिशाली लक्ष्यहरू सिर्जना गर्न यो विधि प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं धेरै विफलता अनुभव गर्न सक्नुहुन्न किनकि तपाईं सक्नुहुन्छ सँधै तपाइँको समय रेखा र तपाइँका लक्ष्यहरू समायोजित गर्नुहोस् तपाईं अधिक सिक्न रूपमा।
महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रत्येक लक्ष्यलाई सेट गर्नु अघि धेरै विचार, विचार र अध्ययन गर्नु हो।
लक्ष्य जर्नलको साथ तपाईंको प्रगतिको ट्र्याक राख्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले आफ्नो लक्ष्य सेट गर्नुभयो, यसको ट्र्याक राख्नु वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो भनाइलाई याद गर्नुहोस् - "लक्षित नभएको लक्ष्य केवल एक इच्छा हो।"
गोल जर्नल प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई आफ्नो विचार राख्न र तपाईं कसरी गरिरहनुभएको छ प्रतिबिम्बित गर्न अनुमति दिनेछ। यसलाई अद्यावधिक राख्नाले तपाईंलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा प्रदान गर्न सक्दछ।
पछिल्लो5 निजी प्रशिक्षक कसरी बन्ने भन्ने बारे राम्रो सल्लाह
अर्कोपृष्ठभूमि जाँच गर्न परम मार्गदर्शक
आकर्षण को २० भन्दा बढि कानून परिवर्तन को प्रेरणा कोटेशन
के मास्लोको आवश्यकताको हाइरार्की २०२० मा अझै सान्दर्भिक छ?
२ तपाईंको ब्रोथ माइन्डसेटलाई आत्म-अनुशासनमा प्रभाव पार्ने तरिकाहरू
पागलपनको सही परिभाषाले एउटै कार्यलाई बारम्बार दोहोर्याइरहेको छ, बिभिन्न परिणामको आशामा।
- अल्बर्ट आइन्स्टाइन